မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေ ကြုံနေရတဲ့အထဲက သတင်းမီဒီယာနဲ့ အနုပညာလုပ်ငန်း တွေကိုပါ အရေးပေါ် ငွေထုတ်ချေးဖို့ အစိုးရက စီစဉ်နေတဲ့အကြောင်း မမေခ ပြောပြပါမယ်။
ကပ်ရောဂါကြောင့် အလုပ်အကိုင်နဲ့ စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲ ကြုံနေရသူတွေကို အစိုးရက အကူအညီပေးနေရာမှာ အခုအခါ မီဒီယာနဲ့ အနုပညာ အသိုင်းအဝန်းကိုပါ ထည့်သွင်းဖို့ အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေ စီစဉ်နေကြတာပါ။ ထိခိုက် ဆုံးရှုံးမှုတွေ ကြုံနေရတဲ့ မီဒီယာ အသိုင်းအဝန်း သာမက ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ သဘင် စတဲ့ အနုပညာအသိုင်းအဝန်း ကိုပါ အကူအညီပေးဖို့ စီစဉ်နေပြီး၊ သတ်မှတ်ချက် အသေးစိတ်ကိုလည်း ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရ စီမံဘဏ္ဍာ ရေးဝန်ကြီး ဦးရဲမင်းဦးက ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်.
“မီဒီယာ ကိုတော့ အကြမ်းဖျဉ်းလိုင်စင်ရှိမယ်လို့ ကျနော်တို့ မျှော်လင့်တယ်။ ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင် ၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် မီဒီယာလိုင်စင် တခုခု သူတို့ရှိနိုင်တယ်။ ဒါဆိုရင် သူတို့က အဲဒီပုံစံနဲ့ ချေး ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။ အာမခံပါမှ ချေးမယ်ဆိုရင် ပိုခက်ခဲကုန်မယ်။ အဲဒီတော့ အာမခံမဲ့ချေးဖို့ကျတော့ ကျနော်တို့မှာ နောက်ထပ် Document လိုသွားတာပေါ့နော်။ အဲဒီ Documentation ကို ကျနော်တို့ အခု ဘဏ်တွေကြားမှာလည်း ညှိနေတယ်။ အကြမ်းဖျဉ်း ဘဏ်တွေ ဆွေးနွေးပြီးရင် ကျနော်တို့ဆွေးနွေးချက်ကို ကော်မတီကို တင်ပြမယ်။ ဘယ်လိုပုံ ချေးမယ်ဆိုတာကို တော်တော်လုပ်နေရတယ် ဒီဘက်မှာ ကျတော့ ။ ကျနေ်ာတို့က အကုန်လုံးကို ချေးမှာ ဒါပေမယ့် လိုင်စင်တော့ ရှိရမှာပေါနေ့ာ်။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် Facebook page လေးဖွင့်ပြီး ကျနော်မီဒီယာပါလို့ပြောရင်တော့ မရဘူးပေါ့နော် ။ ပြန်ကြားရေးမှာ မှတ်ပုံတင်ထားတာဖြစ်ရမယ်၊ နောက်တခါ သူက တကယ့်ကို လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေရမယ်။ အဲဒါ ကျနော်တို့ ပထမ ဦးစားပေးချေးရမှာပေါ့။ အဲလိုမှမဟုတ်ဘူး တချို့က အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးတယ်၊ လုပ်နေတာကတော့ တယောက်တည်း၊ ၂ ယောက်လောက်နဲ့ လုပ်နေတဲ့ မီဒီယာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ကျနော်တို့ အဲလို ၁ ယောက် ၂ ယောက်ကို ကြည့်လိုက်ရင် ကျန်တဲ့တယောက်ချင်း Page ကောက်ထောင်တဲ့လူတွေကို ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဆိုတာဖြစ်သွားတယ်။ အများနဲ့စဥ်းစားတော့ ဒီ စည်းကမ်းနဲ့ ကျတော့ အများနဲ့ ကိုက်ညီအောင် စည်းကမ်းကို ကျနော်တို့ လုပ်ရတာပေါ့။”
ငွေထုတ်ချေးဖို့ အပါအဝင် ကပ်ရောဂါကာလ အရေးပေါ် အကူအညီပေးရေး အစီအစဉ်အတွက် သတ်မှတ်ချက် အသေးစိတ်ကိုတော့ အစောဆုံး ရှေ့သီတင်းပတ်လောက်မှာ ထုတ်ပြန်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ထားကြောင်းလည်း ဦးရဲမင်းဦးက ပြောပါတယ်။ အစီအစဉ်သစ်မှာတော့ သတင်းမီဒီယာနဲ့ အနုပညာ အသိုင်းအဝန်းအပြင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ အတွက် ချေးငွေထုတ်ပေးဖို့တွေလည်း ပါဝင်မယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“ ဒီ ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ သဘင်၊ နောက်တခါ မီဒီယာပေါ့ အဲဒါတွေကို ငွေချေးဖို့ကိစ္စ ကျနော်တို့ စီစဉ်နေပါတယ်။ criteria ကတော့ တယောက်နဲ့ တယောက် မတူကြဘူးဗျ။ ရုပ်ရှင် နဲ့ မီဒီယာဆိုရင် ကုမ္ပဏီတွေဆိုရင် လိုင်စင်ရှိတယ်။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ပြ ဟိုဟာပြ ဒီဟာပြဆိုပြီး ကျနော်တို့က တောင်းလိုက်လို့ရတယ်။ ဂီတလိုမျိုးသဘင်လိုမျိုးကတော့ ခက်တယ်။ အဲလိုဟာတွေကျတော့ နောက်ထပ်ပုံစံသစ်တမျိုးနဲ့ ချေးဖို့အတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ၊ လက်တွေ့ မြေပြင်မှာ ဖြစ်တဲ့အခြေအနေနဲ့ ချေးချင်တဲ့ sector နဲ့ ကျနော်တို့က အဆင်ပြေအောင်လို့ညှိနေတယ်။ စတူဒီယို သမားက သူ့မှာ လိုင်စင်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် အဆိုတော်နဲ့ တီးတဲ့လူမှာက လိုင်စင်မရှိဘူး ။ အဲဒါမျိုး တဦးချင်းတယောက်ချင်းကို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဒါမှ မဟုတ်ရင် သူတို့ရဲ့ အသင်းအဖွဲ့ အစည်းအရုံးတွေက ကျနေ်ာတို့ကို ဘယ်လိုပူးပေါင်းပါဝင်မလဲ အဲဒါတွေကို ကျနော်ညှိယူတယ်ဗျ။ လက်ရှိ COVID ပုံစံက ပြောင်းသွားတယ်၊ ပိုပြီးတော့ ကြီးသွားတယ် ပိုပြီးတော့ များလာတယ် ။ အဲဒီတော့ သက်ရောက်မှုလည်း များနိုင်တယ်ပေါ့။ အဲဒီအတွက် ဆောင်ရွက်မယ့်ပုံစံကို ပုံစံအသစ် ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ဖို့ ဆိုပြီး ကျနော်တို့ ဆွေးနွေးတင်ပြထားတာရှိပါတယ်။”
COVID-19 ကြောင့် စီးပွားရေးအပေါ် ထိခိုက်မှုတွေ သက်သာရာ ရစေရေး ရန်ပုံငွေအဖြစ် မြန်မာအစိုးရက ကနဦး ကျပ်ငွေ ဘီလီယံ ၁၀၀ ကျော်လျာထားပြီး အခုနောက်ထပ် ဘီလီယံ ၁၀၀ ဖြည့်ဆည်းထားပါတယ်။ အရေးပေါ် ရန်ပုံငွေကိုတော့ အတိုးနှုန်း ၁ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ချေးငွေသက်တမ်း ၁ နှစ် သတ်မှတ်ထုတ်ချေးတာ၊ အခြေခံလူတန်းစားတွေကို စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ငွေကြေး အကူအညီပေးတာတွေ အပါအဝင် အထောက်အကူပြုရေး အစီအစဉ်တွေမှာ သုံးစွဲနေတာပါ။ အခုအစီအစဉ်သစ်မှာတော့ သတင်းမီဒီယာ လုပ်ငန်းတွေကိုပါ ငွေထုတ်ချေးမယ့် အစီအစဉ်တွေ ပါဝင်လာတာကြောင့် ကြိုဆိုသူတွေ ရှိပေမဲ့လည်း တင်းကျပ်တဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေ မဖြစ်စေချင်ဘူးလို့ မန္တလေးအခြေစိုက် Voice of Myanmar သတင်းမီဒီယာ ထူထောင်သူ ဦးနေလင်းက ပြောပါတယ်။
“ဒီလို အစိုးရက ထုတ်ချေးမယ်ဆိုတာက ၀မ်းသာစရာပါဗျ ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ မီဒီယာတွေက ပြန်စနိုင်မယ့်အနေအထားရော တော်တော်ခဲယဉ်းလိမ့်မယ်။ အဲဒီတော့ ဒါက နှစ်ရှည်ဘယ်လောက်ချေးမလဲဆိုတာအပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ ဆုံးဖြတ်ရမှာပေါ့ဗျာ။ ဥပမာ ၁ နှစ်လောက်နဲ့ကတော့ ကျနော်တို့က ပြန်ဆက်နိုင်ဖို့ မလွယ်ဘူး ။ ထည့်သလောက် မြုပ်နေတဲ့ အချေအနေဖြစ်တဲ့အတွက် အစိုးရအနေနဲ့ အတိုးမဲ့ ချေးပြီးတော့ ဘယ်နနှစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ ချေးရင် ကျနော်တို့အတွက် အသက်ရှုချောင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။”
ပထမအကြိမ် ချေးငွေအစီအစဉ်မှာ လုပ်ငန်းပေါင်း ၄၃၀၀ လျှောက်ထားခဲ့ပေမဲ့ သတ်မှတ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့လုပ်ငန်းပေါင်း ၃၄၀၀ ကိုသာ ချေးငွေကျပ် ၁၀၁ ဘီလျံကျော်ကို ၇ ကြိမ်ခွဲ ထုတ်ချေးခဲ့ကြောင်းလည်း မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
မွနျမာနိုငျငံမှာ ကိုဗဈကပျရောဂါကွောငျ့ ထိခိုကျဆုံးရှုံးမှုတှေ ကွုံနရေတဲ့အထဲက သတငျးမီဒီယာနဲ့ အနုပညာလုပျငနျး တှကေိုပါ အရေးပျေါ ငှထေုတျခြေးဖို့ အစိုးရက စီစဉျနတေဲ့အကွောငျး မမခေ ပွောပွပါမယျ။
ကပျရောဂါကွောငျ့ အလုပျအကိုငျနဲ့ စားဝတျနရေေး အခကျအခဲ ကွုံနရေသူတှကေို အစိုးရက အကူအညီပေးနရောမှာ အခုအခါ မီဒီယာနဲ့ အနုပညာ အသိုငျးအဝနျးကိုပါ ထညျ့သှငျးဖို့ အစိုးရတာဝနျရှိသူတှေ စီစဉျနကွေတာပါ။ ထိခိုကျ ဆုံးရှုံးမှုတှေ ကွုံနရေတဲ့ မီဒီယာ အသိုငျးအဝနျး သာမက ရုပျရှငျ၊ ဂီတ၊ သဘငျ စတဲ့ အနုပညာအသိုငျးအဝနျး ကိုပါ အကူအညီပေးဖို့ စီစဉျနပွေီး၊ သတျမှတျခကျြ အသေးစိတျကိုလညျး ပွငျဆငျနတေယျလို့ ရနျကုနျတိုငျးအစိုးရ စီမံဘဏ်ဍာ ရေးဝနျကွီး ဦးရဲမငျးဦးက ဗှီအိုအကေို ပွောပါတယျ.
“မီဒီယာ ကိုတော့ အကွမျးဖဉျြးလိုငျစငျရှိမယျလို့ ကနြျောတို့ မြှျောလငျ့တယျ။ ကုမ်ပဏီ မှတျပုံတငျ ၊ ဒါမှမဟုတျရငျ မီဒီယာလိုငျစငျ တခုခု သူတို့ရှိနိုငျတယျ။ ဒါဆိုရငျ သူတို့က အဲဒီပုံစံနဲ့ ခြေး ရငျဖွဈနိုငျတယျပေါ့။ အာမခံပါမှ ခြေးမယျဆိုရငျ ပိုခကျခဲကုနျမယျ။ အဲဒီတော့ အာမခံမဲ့ခြေးဖို့ကတြော့ ကနြျောတို့မှာ နောကျထပျ Document လိုသှားတာပေါ့နျော။ အဲဒီ Documentation ကို ကနြျောတို့ အခု ဘဏျတှကွေားမှာလညျး ညှိနတေယျ။ အကွမျးဖဉျြး ဘဏျတှေ ဆှေးနှေးပွီးရငျ ကနြျောတို့ဆှေးနှေးခကျြကို ကျောမတီကို တငျပွမယျ။ ဘယျလိုပုံ ခြေးမယျဆိုတာကို တျောတျောလုပျနရေတယျ ဒီဘကျမှာ ကတြော့ ။ ကနျြောတို့က အကုနျလုံးကို ခြေးမှာ ဒါပမေယျ့ လိုငျစငျတော့ ရှိရမှာပေါနေ့ျာ။ ကိုယျ့ဟာကိုယျ Facebook page လေးဖှငျ့ပွီး ကနြျောမီဒီယာပါလို့ပွောရငျတော့ မရဘူးပေါ့နျော ။ ပွနျကွားရေးမှာ မှတျပုံတငျထားတာဖွဈရမယျ၊ နောကျတခါ သူက တကယျ့ကို လုပျငနျးလညျပတျနရေမယျ။ အဲဒါ ကနြျောတို့ ပထမ ဦးစားပေးခြေးရမှာပေါ့။ အဲလိုမှမဟုတျဘူး တခြို့က အှနျလိုငျးမှာ နာမညျကွီးတယျ၊ လုပျနတောကတော့ တယောကျတညျး၊ ၂ ယောကျလောကျနဲ့ လုပျနတေဲ့ မီဒီယာဖွဈကောငျးဖွဈနိုငျတယျ။ ကနြျောတို့ အဲလို ၁ ယောကျ ၂ ယောကျကို ကွညျ့လိုကျရငျ ကနျြတဲ့တယောကျခငျြး Page ကောကျထောငျတဲ့လူတှကေို ဘယျလိုစဉျးစားမလဲဆိုတာဖွဈသှားတယျ။ အမြားနဲ့စဥျးစားတော့ ဒီ စညျးကမျးနဲ့ ကတြော့ အမြားနဲ့ ကိုကျညီအောငျ စညျးကမျးကို ကနြျောတို့ လုပျရတာပေါ့။”
ငှထေုတျခြေးဖို့ အပါအဝငျ ကပျရောဂါကာလ အရေးပျေါ အကူအညီပေးရေး အစီအစဉျအတှကျ သတျမှတျခကျြ အသေးစိတျကိုတော့ အစောဆုံး ရှသေီ့တငျးပတျလောကျမှာ ထုတျပွနျနိုငျဖို့ မြှျောလငျ့ထားကွောငျးလညျး ဦးရဲမငျးဦးက ပွောပါတယျ။ အစီအစဉျသဈမှာတော့ သတငျးမီဒီယာနဲ့ အနုပညာ အသိုငျးအဝနျးအပွငျ စီးပှားရေး လုပျငနျးတှေ အတှကျ ခြေးငှထေုတျပေးဖို့တှလေညျး ပါဝငျမယျလို့ ပွောပါတယျ။
“ ဒီ ရုပျရှငျ၊ ဂီတ၊ သဘငျ၊ နောကျတခါ မီဒီယာပေါ့ အဲဒါတှကေို ငှခြေေးဖို့ကိစ်စ ကနြျောတို့ စီစဉျနပေါတယျ။ criteria ကတော့ တယောကျနဲ့ တယောကျ မတူကွဘူးဗြ။ ရုပျရှငျ နဲ့ မီဒီယာဆိုရငျ ကုမ်ပဏီတှဆေိုရငျ လိုငျစငျရှိတယျ။ လုပျငနျးလိုငျစငျပွ ဟိုဟာပွ ဒီဟာပွဆိုပွီး ကနြျောတို့က တောငျးလိုကျလို့ရတယျ။ ဂီတလိုမြိုးသဘငျလိုမြိုးကတော့ ခကျတယျ။ အဲလိုဟာတှကေတြော့ နောကျထပျပုံစံသဈတမြိုးနဲ့ ခြေးဖို့အတှကျ စညျးမဉျြးစညျးကမျးတှေ၊ လကျတှေ့ မွပွေငျမှာ ဖွဈတဲ့အခွအေနနေဲ့ ခြေးခငျြတဲ့ sector နဲ့ ကနြျောတို့က အဆငျပွအေောငျလို့ညှိနတေယျ။ စတူဒီယို သမားက သူ့မှာ လိုငျစငျရှိတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဆိုတျောနဲ့ တီးတဲ့လူမှာက လိုငျစငျမရှိဘူး ။ အဲဒါမြိုး တဦးခငျြးတယောကျခငျြးကို ဘယျလိုလုပျမလဲ ဒါမှ မဟုတျရငျ သူတို့ရဲ့ အသငျးအဖှဲ့ အစညျးအရုံးတှကေ ကနျြောတို့ကို ဘယျလိုပူးပေါငျးပါဝငျမလဲ အဲဒါတှကေို ကနြျောညှိယူတယျဗြ။ လကျရှိ COVID ပုံစံက ပွောငျးသှားတယျ၊ ပိုပွီးတော့ ကွီးသှားတယျ ပိုပွီးတော့ မြားလာတယျ ။ အဲဒီတော့ သကျရောကျမှုလညျး မြားနိုငျတယျပေါ့။ အဲဒီအတှကျ ဆောငျရှကျမယျ့ပုံစံကို ပုံစံအသဈ ပွနျလညျဆောငျရှကျဖို့ ဆိုပွီး ကနြျောတို့ ဆှေးနှေးတငျပွထားတာရှိပါတယျ။”
COVID-19 ကွောငျ့ စီးပှားရေးအပျေါ ထိခိုကျမှုတှေ သကျသာရာ ရစရေေး ရနျပုံငှအေဖွဈ မွနျမာအစိုးရက ကနဦး ကပျြငှေ ဘီလီယံ ၁၀၀ ကြျောလြာထားပွီး အခုနောကျထပျ ဘီလီယံ ၁၀၀ ဖွညျ့ဆညျးထားပါတယျ။ အရေးပျေါ ရနျပုံငှကေိုတော့ အတိုးနှုနျး ၁ ရာခိုငျနှုနျးနဲ့ ခြေးငှသေကျတမျး ၁ နှဈ သတျမှတျထုတျခြေးတာ၊ အခွခေံလူတနျးစားတှကေို စားနပျရိက်ခာနဲ့ငှကွေေး အကူအညီပေးတာတှေ အပါအဝငျ အထောကျအကူပွုရေး အစီအစဉျတှမှော သုံးစှဲနတောပါ။ အခုအစီအစဉျသဈမှာတော့ သတငျးမီဒီယာ လုပျငနျးတှကေိုပါ ငှထေုတျခြေးမယျ့ အစီအစဉျတှေ ပါဝငျလာတာကွောငျ့ ကွိုဆိုသူတှေ ရှိပမေဲ့လညျး တငျးကပျြတဲ့ သတျမှတျခကျြတှေ မဖွဈစခေငျြဘူးလို့ မန်တလေးအခွစေိုကျ Voice of Myanmar သတငျးမီဒီယာ ထူထောငျသူ ဦးနလေငျးက ပွောပါတယျ။
“ဒီလို အစိုးရက ထုတျခြေးမယျဆိုတာက ဝမျးသာစရာပါဗြ ။ ဒါပမေယျ့ ကနြျောတို့ မီဒီယာတှကေ ပွနျစနိုငျမယျ့အနအေထားရော တျောတျောခဲယဉျးလိမျ့မယျ။ အဲဒီတော့ ဒါက နှဈရှညျဘယျလောကျခြေးမလဲဆိုတာအပျေါမှာ မူတညျပွီးတော့ ကနြျောတို့ ဆုံးဖွတျရမှာပေါ့ဗြာ။ ဥပမာ ၁ နှဈလောကျနဲ့ကတော့ ကနြျောတို့က ပွနျဆကျနိုငျဖို့ မလှယျဘူး ။ ထညျ့သလောကျ မွုပျနတေဲ့ အခအြေနဖွေဈတဲ့အတှကျ အစိုးရအနနေဲ့ အတိုးမဲ့ ခြေးပွီးတော့ ဘယျနနှဈဆိုတဲ့အတိုငျးအတာနဲ့ ခြေးရငျ ကနြျောတို့အတှကျ အသကျရှုခြောငျမယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။”
ပထမအကွိမျ ခြေးငှအေစီအစဉျမှာ လုပျငနျးပေါငျး ၄၃၀၀ လြှောကျထားခဲ့ပမေဲ့ သတျမှတျခကျြနဲ့ ကိုကျညီတဲ့လုပျငနျးပေါငျး ၃၄၀၀ ကိုသာ ခြေးငှကေပျြ ၁၀၁ ဘီလြံကြျောကို ၇ ကွိမျခှဲ ထုတျခြေးခဲ့ကွောငျးလညျး မွနျမာနိုငျငံရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုနဲ့ နိုငျငံခွားစီးပှားဆကျသှယျရေးဝနျကွီးဌာနက ထုတျပွနျထားပါတယျ။